Isitolo esidayisa yonke impahla Sodium Gluconate ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
I-JS-103 Ukusebenza okuphezulu kwe-PCE Umama Utshwala
I-JS-104 Compound PCE Umama Utshwala
I-BT-302 High slump retain PCE Mother Liquor
I-BT-303 Super Slump igcina i-PCE Mother Liquor
Ikhebula Grouting Agent
Umenzeli Wokuqala Wamandla
I-Flash Setting Admxiture
Umenzeli Wokugcina Amanzi
Izinto zokwenziwa ngamakhemikhali
I-Polycarboxylate Superplasticizer Monomer kumodi ye-Ether (TPEG-HPEG)
I-Sodium Gluconate ebizwa nangokuthi i-D-Gluconic Acid, i-Monosodium Salt ingusawoti we-sodium we-gluconic acid futhi ikhiqizwa ngokuvutshelwa kwe-glucose. Kuyinto luyimbudumbudu emhlophe, crystalline okuqinile / powder okuyinto encibilikayo kakhulu emanzini.
I-Sodium Gluconate ebizwa nangokuthi i-D-Gluconic Acid, i-Monosodium Salt ingusawoti we-sodium we-gluconic acid futhi ikhiqizwa ngokuvutshelwa kwe-glucose. Kuyinto luyimbudumbudu emhlophe, crystalline okuqinile / powder okuyinto encibilikayo kakhulu emanzini. Ayonakalisi, ayinabuthi, iyabola futhi iyavuseleleka.Imelana ne-oxidation nokwehliswa ngisho nasezingeni lokushisa eliphakeme. Impahla eyinhloko ye-sodium gluconate ngamandla ayo amahle kakhulu wokukopela, ikakhulukazi kwizisombululo ze-alkaline nezigxile kakhulu. Kwakha ama-chelates azinzile ane-calcium, insimbi, ithusi, i-aluminium nezinye izinsimbi ezisindayo. I-ejenti ephakeme yokukhohlisa kune-EDTA, i-NTA nama-phosphonates.
Izinhlayiya ezimhlophe zamakhristali / i-powder
1. Imboni Yokudla: I-Sodium gluconate isebenza njenge-stabilizer, i-sequestrant ne-thickener uma isetshenziswa njengesengezo sokudla.
2. Imboni yezemithi: Emkhakheni wezokwelapha, ingagcina ibhalansi ye-asidi ne-alkali emzimbeni womuntu, futhi ibuyise ukusebenza okujwayelekile kwezinzwa. Ingasetshenziswa ekuvikeleni nasekwelapheni i-syndrome nge-sodium ephansi.
3. Izimonyo & Nokunakekelwa Komuntu Siqu: I-Sodium gluconate isetshenziswa njenge-ejenti ekhohlisayo ukwakha izakhiwo ezinezinsimbi ezingathinta ukuzinza nokubukeka kwemikhiqizo yezimonyo. Ama-Gluconate ayengezwa kubahlanzayo nakuma-shampoos ukwandisa isikhumba ngokuheha ama-ions amanzi anzima. Ama-Gluconate asetshenziswa futhi emikhiqizweni yokunakekelwa ngomlomo nangamazinyo efana nomuthi wokuxubha lapho usetshenziselwa ukuhlukanisa i-calcium futhi kusiza ukuvikela i-gingivitis.
4. Imboni Yokuhlanza: I-Sodium gluconate isetshenziswa kakhulu ezintweni eziningi zokuhlanza zasendlini, njengesitsha, ilondolo, njll.
Iphakheji:Izikhwama zepulasitiki ezingama-25kg ezine-liner ye-PP. Enye iphakethe ingatholakala uma ucelwa.
Isitoreji:Isikhathi se-Shelf-life yiminyaka emi-2 uma igcinwe endaweni epholile, eyomile. Ukuhlola kufanele kwenziwe ngemuva kokuphelelwa yisikhathi.
Langaphambilini I-cellulose Ether HPMC yokuPlasta / Ukhonkolo / iGrout njengoMenzeli Wokugcina Amanzi
Olandelayo: I-Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
Umenzeli weSodium Gluconate Chelating
Ukuhlanganiswa Kwokhonkolo KweSodium Gluconate
I-Sodium Gluconate Ekudleni
I-Sodium Gluconate Esensabeni
I-Polycarboxylate Ether Monomer HPEG / TPEG
Shandong Gaoqiang okusha Material Technology Co., Ltd.
Ucingo: +86 18353997870